Abwaan Hadraawi iyo 3 kale oo laga badbaaday daad qaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Abwaan Hadraawi iyo 3 kale oo laga badbaaday daad qaaday
A warsame 23 March 2015 24 March 2015
Mareeg.com: Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi) iyo saddex qof oo la socday, ayaa dirqi lagaga badbaadiyey dooxa Dacar-budhuq ee u dhexeeya Hargeysa iyo Berbera, kaasoo ay doonayeen iney ka gudbaan xilli roob da’ay oo ay biyo badan marayeen.
Hadraawi iyo dadka kale ee la socday waxaa badbaadiyey shacabka deegaankaas ku nool, waxaanu Abwaanku u mahadnaqay dadweynihii badbaadiyey ee ka soo dhex saaray daadka qaadanayey.
“Waxaan moodaynay in biyaha socda yar yihiin, sidaas baanu is nidhi waad dhaafi kartaan, haseyeeshee biyaha marayay oo xoog badnaa ayaa nala tagay.. balanka ilaahay hada xabaal baanu ku jiri lahayn hadii aanu ilaahay noo soo diri lahayn dadkii na badbaadiyay baan ugu mahad celinayaa.”ayuu yiri Abwaan Hadraawi.
Abwaanku waxa uu sheegay in gaadhigii ay la socdeen daadku la tagay, balse iyaga ALLE uu ka badbaadiyay shilkaas halista ah.
Dooxan Dacar Budhuq ayaa wakhtiyadda roobku da’ayaan galaafta dad iyo duunyo badan, waxaanu inta badan halis galiyaa dadka safar ku jira oo u kala socda Hargeysa iyo Berbera.
Dooxaan ayaa horay ula tegay qaar ka mid ah mas’uuliyiinta maamulka Somaliland iyo dad shacab ah, waxaana shilkaan kusoo beegmay xilli ay deegaanada Somalilnd ka curteen roobka guga.
Ciidan taageersan madaxweyne Haadi oo Xuuthiyiinta dib uga celiyey gobolka Laxa ee koonfurta Yemen